Vaovao - Ny fotokevitra fiasa sy ny fisafidianana ny refin'ny tsindry entona
Amin'ny famokarana indostrialy isan'andro, ny fandrefesana entona isan-karazany dia tena ilaina amin'ny fitaovana fandrefesana mahazatra. Misy karazany maro ny fandrefesana tsindry entona, ao anatin'izany ny karazana famantarana ny tondro sy ny karazana fampirantiana dizitaly. Izy ireo koa dia afaka manana fahaiza-mamindra lavitra mba hahafahana manara-maso ireo angona tsindry eny ivelan'ny toerana, sns.
Refesin'ny tsindry entona
Betsaka ny karazana fitaovana azo ampiasaina ankehitriny, ary matetika koa ny fampiasana fandrefesana fanerena. Aorian'ny fampiasana azy, ity fitaovana ity dia afaka maneho mivantana ny valin'ny fandrefesana azo antoka. Izy io dia afaka manao fandrefesana mety amin'ny data sy ny angona momba ny tontolo iainana, ary koa amin'ny tanjaka mekanika tsara, azo ampiasaina amin'ny fiadanan-tsaina tsy misy olana izany, ary lava be ny androm-piainana. Mety amin'ny fampiasana indostria isan-karazany izy io, ary mora sy tsotra ny mividy, ary avo dia avo ny vidiny.
Rehefa mandrefy ny tsindry ny mpanelanelana ny refin'ny tsindry entona, ny fotokevitra fiasany dia ny fametrahana fitaovana mitoka-monina eo an-tokotanin'ny fandrefesana. Ny tsindry ny mpanelanelana dia halefa amin'ny fandrefesana ny tsindry anatiny amin'ny alàlan'ny ranon-tsindrona, ary ny sanda voatondro dia ho azo.
Ny mampiavaka azy dia ny miasa amin'ny fomba mitokana mitokana. Ny refin'ny tsindry entona dia mazàna amin'ny fandrefesana azy sy fitaovana manokana mitokana. Ny refin'ny tsindry entona dia vokatra manokana ampiasaina handrefesana ny salantsalany voafaritra ao amin'ny refy fanerena. Izy io dia afaka mandrefy ny haino aman-jery amin'ny alàlan'ny fanalefahana mafy, ny mari-pana ambony ary ny viscosity avo.
1. Ny fepetra takiana amin'ny fandrefesana amin'ny dingan'ny famokarana, ao anatin'izany ny refy sy ny marina. Amin'ny tranga fitsapana statika (na fiovana miadana), voafaritra fa ny sanda farany ambony amin'ny tsindry refesina dia tokony ho roa ampahatelon'ny sanda feno amin'ny refin'ny tsindry; raha misy ny tsindry mikapoka (miovaova), ny sanda farany ambony amin'ny tsindry refesina dia tokony ho ny fandrefesana ny antsasaky ny sanda feno.
2. Toetrandro tontolo iainana eo an-toerana, toy ny maripana manodidina, ny harafesina, ny hovitrovitra ary ny hamandoana. Ohatra, ny refin'ny tsindry tsy voadona izay ampiasaina amin'ny toe-piainana mihozongozona.
3. Ny fananan'ny mpanelanelana refesina, toy ny fanjakana (gazy, ranon-javatra), mari-pana, viscosite, fanalefahana, diplaoman'ny fandotoana, fahamaizana ary fipoahana sns ... Toy ny fatra oksizenina, fandrefesana acetylene, fandrefesana «tsy misy menaka», fandrefesana fanoherana fanoherana ny harafesina, fatra faneriterena mahazaka hafanana avo lenta, fandrefesana tsindry entona sns.
4. Mety amin'ny fandinihan'ny mpiasa. Mifidiana metatra misy savaivony sy refy hafa arakaraka ny toerana sy hazavana misy ny fitaovana fitiliana.
Voatonona ny sandan'ny fampiasana sy ny fitoniana amin'ity fandrefesana entona ity, ny vokany dia mety ho tena tsara, mba hahazoana antoka fa ho marin-toerana kokoa amin'ny fampiasana azy, azonao atao koa ny mandinika ny atin'ny fividianana. Miresaka ny fomba fividianana izany. Azonao atao ny mandinika ny fisafidianana modely misy teknolojia famokarana avo lenta, ary azonao atao ny mizaha toetra ny mari-pana, ny hamandoana, ny viscosity ary ny masontsivana hafa. Mandritra izany fotoana izany dia azonao atao koa ny mandinika ny refy fandrefesana. Ireto no torolàlana lehibe hividianana.